Soosaarayaasha Naqshadeynta Naqshadeynta iyo Soosaarayaasha - Warshadda Naqshadeynta Mashruuca Shiinaha
Hordhac Villa: Waa fiditaan ku habboon deganaanshaha qoyska iyo macne u leh raaxada, dhamaadka-sare, asturnaanta iyo hantida. Waa deggenaansho beero laga dhisay xaafado xaafadeed ama goobo muuqaal ah oo lagu soo kabto. Waa goob lagu raaxeysto nolosha. Waxaa guud ahaan la fahamsan yahay, marka laga soo tago shaqada aasaasiga ah ee "ku noolaanshaha" degenaansho ahaan, deggenaada heerka-sare ah, waxay inta badan ka tarjumaysaa tayada nolosha iyo astaamaha lagu raaxeysto, iyo deggenaanshaha beerta madax-bannaan ee meani casrigan .. .
Hordhac Awoodda farsamada ee shirkadda: Shirkaddu waxay leedahay 7 naqshadeeye, 3 naqshadeeyayaal qaabdhismeed, 2 naqshadeeyayaal naqshad dhismeed, iyo 1 naqshadeeye biyo iyo koronto, oo saddex ka mid ah ay ka shaqeynayeen machadka naqshadeynta muddo ka badan 3 sano. Wershadaha xirfadeed ee u dhigma, nolosha shaqo ee ugu yar ee naqshadeeyayaashu waa shan sano, nolosha ugu badan ee shaqaduna waxay gaadhay 13 sano. Naqshadeynta sawirrada qaabdhismeedka biraha waxaa ka mid ah: (dhismayaasha xafiiska, hudheelada, guryaha martida) iyo looxyo kale ...